Who were Bengali, so called Rohingya?: ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိရှိကြပဲ ရန်းတုတ်နေကြသည့် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ်တောများ၏ နေထိုင်မှုဘ၀နှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ
ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိရှိကြပဲ ရန်းတုတ်နေကြသည့် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ်တောများ၏ နေထိုင်မှုဘ၀နှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ
အရှေ့ဘက် ၀ လူမျိုးတွေ အကြောင်းရေးပီးသွားတော့ အနောက်ဖက် မျှော်ကြည့်လိုက်တယ် တရုတ်လို လက်နက်အကောင်းစားကြီးတွေ အနုမြူတွေနဲ့ ခောတ်မှီစစ်တပ်ကြီး အားရစရာသိတ်မတွေ့... ဒါပေမဲ့ ပေါ့သေးသေးတော့ မမှတ်လေနဲ့ တစ်ချက်မှားတာနဲ့ အမျိုးအနွယ်ပါ ၀ါးစားသွားမဲ့ လူ့စပါးကြီးတွေရှိနေကြတယ်... သူတို့သမိုင်းကျောင်းကို မလေ့လာခင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအကြောင်း နည်းနည်း စနည်းနာကြည့်မိတယ်... လွတ်လပ်ရေးရတော့ ဘာသာမတူလို့ အိန္ဒိယကနေ ပါကစ္စတန်က ခွဲထွက်တယ်... အဲ့ဒိအခါမှာ နဂိုကမှ ဖင်ခေါင်းကျယ်ကျယ် လေကြီးမိုးကြီး အပေါ်စီကနေ နေချင်တဲ့ ဘင်္ဂလီတွေက ဘာသာတူတာတောင်မှ ပေါင်းလို့မရတော့လို့ ပါကစ္စတန်ကနေခွဲထွက်တယ် ဘင်္ဂလားတဲ့။
ငယ်ငယ်တုန်းကနေ အခုထိ သိနေရတာက မိုးတွင်းဆို မုန်တိုင်းဖြစ်ပီ ရေကြီးတယ်။ အနောက်ဘက် ကမ်းလွန်မှာ ဖြစ်သမျှ မုန်တိုင်းနည်းပါး ဘင်္ဂလားကိုဝင်တယ်၊ မြန်မာပြည်ကတော့ အဖျားခတ်တာပေါ့နော်။ နဂိုကတည်းကမှ ဆင်းရဲတဲ့ ဘင်္ဂလား (အဲ့ဒိတုန်းက ပြောတာ အခုဆို နယ်စပ်မှာ ဘင်္ဂလားဖုန်းတွေ လေး၊ ငါး သိန်းနဲ့ ၀ယ်သုံးနေတယ် ဆိုကတည်းက ဘင်္ဂလား ဆင်းရဲလား မဆင်းရဲလား၊ ခောတ်ဘယ်လောက်မှီလဲ သိသာတယ်နော်) လူတွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲကို ၀င်လာဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ လူဦးရေ ထိမ်းသိမ်းမှုမရှိ သားဆက်ခြားခြင်းကို ဘာသာရေးအရ တားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တိုးပွားလာတဲ့ လူဦးရေးဟာလည်း စားရေရိက္ခာ ရှားပါးမှု လယ်လုပ်နိုင်တဲ့ မြေလွတ်မြေရိုင်းရှားပါးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့ အချိန်မှာ ရှိတဲ့လူဦးရေထက် မြောက်များစွာ ပိုလျှံနေတဲ့ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေဟာ မျက်စောင်းထိုးစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့စီမှာ ရှမ်းကုန်းပြင်မြင့်တွေ ဒီလောက်ပေါတာ ကျုပ်တို့ကို မြေလွတ် နည်းနည်းပေးတော့ ဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲလို့ ကျွန်တော်တို့ ပိုင်တဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကို သွားရည်ကျပီး သူတို့ဘက်ကပြောခဲ့တာပါ။
ရှိနေတဲ့ မြောက်များစွာသော လယ်ယာမြေများကို ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးတွေလုပ်ကိုင်ဖို့မှာ လက်မှု လယ်ယာကိုသာ ပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် လယ်လုပ်သူ လယ်ကူလီတွေလိုလာလေတော့ လုပ်ခသက်သာတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေရှိတော့ အဆင်ပြေလာကြာပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းကလည်း လယ်လုပ်သူ လယ်ကူလီတွေလုပ်နေကြဆိုတော့ ပိုအဆင်ပြေစေတာပေါ့။ လယ်လုပ်တယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ကောက်စိုက်ပျိုးနှုတ်၊ ရိတ်သိမ်း ခြွေလှေ့တဲ့အဆင့်တွေများတော့ လူအင်အားများများ လိုလေတော့ မိသားစုလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်လာပြီး အလုပ်အကိုင်ကို ၀င်လုပ်ကြလေသည်ပေါ့။ ဟိုဘက်မှာလည်း မြေယာတွေ နေစရာတွေက အဆမတန်များပြားတဲ့ လူဦးရေးကြောင့် ကြပ်ညပ်လာပီလေ။ ဟိုဘက်မှာ ငတ်ပြတ်နေလို့ ဒီဘက်ကို ကူးလာကြတယ်ဆိုတော့ ဆန်ရေစပါး ပေါများတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ကပ်ရပ်နေကြသည်ပေ့ါ။
၁၉၈၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ အမှတ် (၉၂) ခြေလျင်တပ်ရင်းက ကြည်း ၉၇၉၁ ဗိုလ်မှူးလှမြိုင်၏ နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ရောက်မှုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဖြစ်ရပ်အခြေအနေတစ်ချို့ တင်ပြချက်တွင် ၀င်ပုံဝင်နည်းမှာ အေးအေးမှန်မှန် တစိမ့်စိမ့်ဝင်နေခြင်းနှင့် အစုလိုက်အဖွဲ့လိုက်၊ အချိန်းအချက်ပြလုပ်၍ ကြိုတင်စီစဉ်သောစနစ်ဖြင့် ၀င်ရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ အသုံးပြုသည့် ဖားခုန်စနစ်အရ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အနှံ့အပြားသို့ ဖြန့်ခွဲထွက်ခွာသွားကြပြီးဖြစ်သော ဘင်္ဂလီနေအိမ် အလွတ်များနေရာတွင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီးသို့ ၀င်ရောက်သွားသော အီစွပ်၏အိမ်တွင်၊ နောက်ထပ် အီစွပ်အသစ်အား အစားထိုး၍၎င်း၊ မိုဟာမက်၏အိမ်တွင် နောက်ထပ်မိုဟာမက်အသစ်အား အစားထိုး၍၎င်း အိမ်နှင့်လူဦးရေ တိုးလာသည်ဟု မမြင်တွေရစေရန်ပြုလုပ်ကြောင်း ဟုဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဘင်္ဂလီတွေ ဘယ်လိုမြန်မာနိုင်ငံထဲကို ၀င်လာတယ် ဘယ်လိုပြန့်နှံ့လာတယ်ဆိုတာ အဖြေပေါ်လာပီထင်ပါတယ်။ သူတို့ပြောကြသလို အာရပ်တွေ မုန်တိုင်းမိလို့ မြောလာတယ်ဆိုတဲ့ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်အရဆိုရင် မြန်မာကမ်းရိုးတန်း ဒီလောက်အရှည်ကြီးမှာ ဘင်္ဂလားနဲ့ နယ်နိမိတ်ခြင်း ထိစပ်နေတဲ့ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာပဲ ထိုပြဿနာရှိတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်။ ရှေးယခင်ကတည်းက နေထိုင်လာခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ ရခိုင်ဒေသဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှု သူမတူအောင်ထွန်းကားခဲ့တာကို ဝေသာလီခောတ်ကနေ ယနေ့အထိ ခောတ်အဆက်ဆက် သမိုင်းကြောင်းတွေမှာ အထင်အရှားရှိပါတယ်။ ယခုလက်ရှိကို ရှေးဟောင်းသုတေသနက တူးဖော်နေတဲ့ ဝေသာလီမြို့ဟောင်းမှာ ရှေးခောတ် ဘုရားပြို ဘုရားပျက်ပဲ တွေ့ရပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အပိုင်းအစ၊ ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများ စိုးစင်းမျှ မတွေ့ရပါဘူး။ ရခိုင်ပြည် တော်လျှောက်မှာ နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဘင်္ဂလီခေါ်တောများ မရှိသည့် ရခိုင်မြို့နယ်များ ရှိပါတယ်။ မာန်အောင်၊ နှင့် အန်း မြို့နယ်များမှာ မည်သည့် ဘင်္ဂလီမှမရှိပါဘူး။ ရှေးခောတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ သက်သေ အထောက်အထားလည်း မရှိပါဘူး။ ထို့အတူပဲ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နဲ့ ရခိုင်နယ်နိမိတ်ခြားဖြစ်တဲ့ ဂွ မြို့မှာလည်း ရိုဟင်ဂျာဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အထောက်အထား အလျင်းကင်းမဲ့သလို မည်သည့် ဘင်္ဂလီမှမရှိပါ။ ထို့အတွက် ရိုဟင်ဂျာလို့ နာမည်တပ်နေတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လုံးဝမဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂလားများသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ လူတိုင်းက လက်ခံနားလည် သဘောပေါက်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒိမှာ သူတို့ စွတ်စွဲထားတဲ့ စာရွက်စာတန်းနဲ့ စနစ်တကျလုပ်ထားတဲ့ ပိတ်ပင်ခြင်းများ ဆိုတဲ့အထဲက လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်အား ပိတ်ပင်ထားခြင်းဆိုတာ ပါပါတယ်။ မိမိနိုင်ငံထဲကို ရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တစ်စိမ်းများကို သွားလိုရာသွားဖို့ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေဆိုတာ ရှိပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ လိုက်နာပါတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်တောင်မှ အဆင့်ဆင့်သော ဇကာများကဲ့သို့သော စည်းကမ်းများနဲ့ စစ်ဆေးပီးမှသာ နိုင်ငံအတွင်းသွားလာခွင့်ကို ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး တံခါးမရှိ၊ ဓါးမရှိ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့်မရှိပါဘူး။
နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ အိမ်ထောင်ပြုခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောဘက်က ရွာတွေကို သွားကြည့်ပါ။ အဲ့ဒိမှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေဟာ စားစရာသာ မရှိရင်နေမယ် ယူထားတဲ့ မိန်းမကတော့ အနည်းဆုံး ၄ ယောက်နဲ့ ၅ ယောက် ၀န်းကျင်ရှိပါတယ်။ ဘာသာရေးအရလည်း အားပေးတဲ့အပြင် သားဆက်ခြားမှုအသိပညာ မရှိလေတော့ တစ်မိသားစုကို အနည်းဆုံး ကလေး အယောက် ၂၀ နဲ့အထက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒိဒေသမှာ ရှိတဲ့ ဘင်္ဂလီတွေ နေပုံကို မျက်လုံးထဲမြင်အောင် ပြောပြပါ့မယ်။ သူတို့ရဲ့ အိမ်ဟာ ရွှံ့နဲ့မံထားတဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဂူပုံစံအိမ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှေ့ဝင်ပေါက်၊ နောက်ဖေးထွက်ပေါက် နှစ်ပေါက်ပဲ ပါပါတယ်။ နေ့လည်နေ့ခင်းတောင် အထဲမှာ မှောင်မဲနေပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျလို့ရှိရင် ဆင်းရဲလွန်းတဲ့အတွက် အဲ့ဒိမိန်းမရဲ့ မွေးရင်းတွေဟာ အဲ့ဒိအမျိုးသမီးနဲ့ လိုက်နေကြပါတယ်။ ဥပမာ မိန်းမမှာ ညီအစ်မ ၄ ယောက်ရှိရင် ၄ ယောက်စလုံးလိုက်နေကြပါတယ်။
ကဲ အဲ့ဒိတော့ ဒီလောက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးရှိတဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ မှောင်မှောင်မဲမဲ ညဘက်အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ သကောင့်သားအနေနဲ့ ကြိုက်ရာမိန်းမနဲ့ နှစ်ပါးသွားလို့ရပါတယ်။ ဘာသာရေးအရ အော်လို့လည်းမရ တိုင်လို့လည်းမရ၊ အမြဲတန်း ဆာရီကခြုံထားရလေတော့ (အဲ့ဒါလည်း စဉ်းစားစရာပါ၊ စားစရာမရှိပေမဲ့ ၀တ်စရာတော့ ရှိကြတယ်ဗျာ) မိန်းမဖြစ်ပီးရော သကောင့်သားရဲ့ လက်ချက်နဲ့ ဗိုက်ကြီးကြသည်ပေါ့။ အဲ့ဒိဒေသရဲ့ စကားပုံကလည်း ရှိသေးတယ် “ကုလား အနားမပေးတာ မြေကြီးရယ်၊ မိန်းမဗိုက်ရယ်၊ ____ ရယ်တဲ့” ရီရီမောမောနဲ့ ဘင်္ဂလီတွေက ရှင်းပြကြသဗျာ။ အဲ့ဒိလိုနဲ့ပဲ မြန်မာ ဘင်္ဂလားနယ်စပ် တလျှောက်မှာ ဘင်္ဂလီ ကုလားလို့ခေါ်တဲ့ ခေါ်တောမျိုးတွေ များပြားလာပါတယ်။ အခုထိကို BBC ကရေးထားတဲ့ လွတ်လပ်စွာ လက်ထပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံအရ ကလေးဟာ တစ်မိသားစုမှာ အနည်းဆုံး အယောက် ၂၀ ၀န်းကျင်ရှိအောင် အဲ့ဒိလောက် များပါတယ်။
တဖန် ထိရောက်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးလို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရ ဗလပွဖြစ်နေအောင် မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ မိခင်တွေ ကျန်းမာရေးအတွက် သူတို့မှာ ပူပင်စရာမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒိအတွက် ထိမ်းသိမ်းစောင့်လျှောက်ဖို့ နိုင်ငံတကာကနေ ရောက်ရှိနေတဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ INGO အဖွဲ့အစည်းတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။ အဲ့ဒိမှာ ရှိကြတဲအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် INGO ထဲမှာ Maltesa, GAA, GRET, AZG / MSF (Holland), ACF နဲ့ ADRA တို့ဟာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော၊ ရသေ့တောင် ပါတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ လည့်ပါတ်ပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ပေးနေပါတယ်။ အဆိုပါ INGO တွေအတွက် ရံပုံငွေတွေကတော့ EU, ECHO, 3D Fund, UNHCR, UNDP/IND Project တွေကနေ ထောက်ပံ့ ပံ့ပိုးပေးပါတယ် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဗြိတိန်အစိုးရက ပံ့ပိုးတဲ့ DFID Budget မှလည်း ဝေပုံကြခွဲတန်းက ရပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ UNDP/IND, UNHCR, WFP, FAO တို့ဟာ အဆိုပါဒေသတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေတာ လွန်ခဲ့သည့် ၁၉၉၅ ခုနှစ် ၀န်းကျင်က စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ UNICEF မှ ထပ်တိုးအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးပန်းနေပါတယ်။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အဖွဲ့ပိုင် Speed Boat, Motor Boat များစွာရှိကြပြီး၊ ဒေသတွင်း ဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် Walkie Talkie အားအသုံးပြုပြီး အဆိုပါ Walkie Talkie အတွင်းသို့ လက်ရှိသုံးနေသည် System နှင့် ကိုက်ညီသည့် Program အား UNHCR မှထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ တရားဝင်လမ်းကြောင်းမှ တစ်ဆင့် ဘင်္ဂလားများအား ၎င်းအဖွဲ့များမှ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးနေသည်မှာ တစ်နှစ်လျင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီပြီးရှိပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Budget သက်တန်း ထပ်မံတိုးခါနီးတိုင်း အဆိုပါ INGO တွေ သူ့ထက်ငါ Budget များများရအောင် ဘယ်လောက် ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေကြောင်း ဘာတွေလိုနေသေးကြောင်း Proposal စာရွက်စာတန်းတွေဟာ Donor တွေရှိမှာ နှစ်တိုင်းတက်လာနေပါတယ်။ ၎င်းအဖွဲ့တွေနဲ့ INGO တွေမှာ ဒေသခံတွေထက် အဆိုပါ ဘင်္ဂလားတွေကိုသာ ဦးစားပေး အလုပ်ခန့်ထားခြင်း၊ ဆေး ကုရာတွင်လည်း ဒေသရှိရင်းစွဲ ရခိုင်များကို ပစ်ပယ်ထား၍ ဘင်္ဂလီများကိုသာ ဆေးကုပေးနေခြင်းကြောင့် အစိုးရမှ ကြပ်မပ်လိုက်သဖြင့်သာ မတတ်သာ၍ ဒေသရှိရင်းစွဲ ရခိုင်များအား အလုပ်အကိုင်များ ပေးခြင်း၊ ဆေးကုပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောကဲ့သို့သော ချောင်ကြသည့်နေရာများသို့ သွားရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည့် ဆရာဝန်အများစုမှာ ယောက်ျားသားများ ဖြစ်ကြသဖြင့် အဓိက အတားအဆီးဖြစ်နေသည့် ဘာသာရေးကြောင့် ထိရောက်မှု ရှိသင့်သလောက် မရှိခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပင် စောင့်ရှောက်နေသည့် ကျန်းမာရေး၊ အသိပညာပေးမှုများအား အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကျွန်တော် ယခင်ရေးခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတွင် သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ (http://www.facebook.com/note.php?note_id=222159121164050) အဆိုပါ ဆောင်းပါးတွင် ပါဝင်သည့် ခြင်ထောင်ရရှိရန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သဖွယ် လိမ်ညာခြင်း၊ ဆီးရောင်းစားခြင်း၊ ကလေးအငှားလိုက်ခြင်း အစရှိသည်များသည် ဘူးသီးတောင် မောင်းတောရှိ INGO များအား ကလိန်ကကျစ်ပြုလုပ်နေကြသည့် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတို့အကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယထြာဘူတ ကြကြ သုံးသပ်မည်ဆိုလျင် လွတ်လပ်စွာ အိမ်ထောင်ပြုခွင့်မရှိလျင်၊ လုံလောက်သော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမရှိလျင် အဆိုပါ ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ မြန်မာနယ်စပ်တွင် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားမည်မှာ ကြာလှပြီဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင်ကတည်းက ရှိခဲ့သည့် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်များဖြစ်ကြသော နာဂနှင့် ပအို့ဝ်လူမျိုးများ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး ဖြစ်နေသဖြင့် နိုင်ငံတော်မှ ပြန်လည် စောင့်ရှောက်နေသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ယခုမှာမူ မျိုးသုဉ်းမပျောက်ကွယ်သည့်အပြင် ယခင်ကထက် အဆပေါင်း မြောက်များစွာ ပွားများနေထိုင်ကြသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့ ပြောဆိုနေမှုမှာ လုပ်ကြံပြောဆိုနေမှန်း သိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေး လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိခြင်းဆိုတာဟာလည်း မှန်းခြေနှင့် ရမ်းတုတ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘင်္ဂလီတွေထဲက အရမ်းအောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမား မြန်မာနာမည် မောင်ကျော်ဆိုတာကို ဘူးသီးတောင် မြို့မှာမသိသူ မရှိပါဘူး။ IPStar ကို လျှောက်ထားပြီးတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖုန်းလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ Long Range Cordless များဖြင့် ဖုန်းလိုင်းများအား PABX အထိုင်ဖြင့် ဖြန့်ဝေပေးခြင်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ယခင် IPStar များအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးနှင့် Bagan Cybertech အသိမ်းခံရစဉ်ကာလများမှာ အချို့သော INGO အများစုဟာ ၎င်းမောင်ကျော့်စီမှ ရေဒီယို Cordless ဖုန်းလိုင်းအား လစဉ်ကြေးပေးပြီး ငှားရန်းသုံးစွဲရပါတယ်။
ယခုလက်ရှိကို ၎င်းအဆောက်အဦးထဲ ၀င်သွားလျင်ပင် နံရံတွင် နာရီပေါင်း မြောက်များစွာအား နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ဟော်တယ်တစ်ခုကဲ့သို့ တပ်ဆင်ထားတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဒူဘိုင်း၊ ဘရူနိုင်း၊ UAE၊ မလေးရှား စတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ အချိန်တွေကို ဖုန်းလာပြောသူများ သိရှိနိုင်ရန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ပင် ဈေးအတွင်းနှင့် ပါတ်ဝန်းကျင်များတွင်လည်း ငွေကြေးတတ်နိုင်သည့် ဘင်္ဂလားများမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်များနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ပညာသင်ကြားခွင့်အား ပိတ်ပင်ထားခြင်းဆိုတာလည်း အခြေအမြစ်မရှိပါဘူး။ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ဘင်္ဂလီလေးတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။ အဓိကပြဿနာက ပညာသင်ကြားခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ ငွေကြေး ချို့တဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးချို့တဲ့ခြင်းမှာလည်း တစ်အိမ်ထောင်လျင် ကလေး ၂၀ ၀န်းကျင် မွေးထားသဖြင့် မိဘမှ မကြွေးမွေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဘင်္ဂလီထဲမှာ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများက တစ်ယောက်တန်သည် လေးယောက်တန်သည် စသည်ဖြင့် မိမိတို့ အိမ်တွင် ခေါ်မွေးထားပြီး ပညာသင်ကြားစေပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ သွေးမတော် သားမစပ်များကို အိမ်ခေါ်ထားသည့်အတွက် အိမ်အလုပ်များအား သိမ်းကြုံးခိုင်းစေခြင်း၊ ရိုက်နှက်ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းများလည်း မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပွားပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ မရှိဆင်းရဲသား ဘင်္ဂလီများအား အိမ်ပေါ်တွင် ခေါ်တင်ထား၍ အမျိုးအနွယ်မြင့်မားရန် စောင့်ရှောက်ကြသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်း ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဘင်္ဂလီ ဈေးဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်၊ ကွမ်းယာဆိုင် များတွင် ပိုက်ဆံမပေးပဲ စားနိုင်ကြပါတယ်။ ပြင်သစ် INGO ဖြစ်သော AMI ၎င်းဒေသတွင် ရှိခဲ့စဉ်က Base Logistician ရာထူးဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အိုမာဖာရွတ်ဟာလည်း ထိုကဲ့သို့ သစ်သားကန်ထရိုက်စီမှ ပစ္စည်းများယူပြီး ငွေအကြေ ပေးခြခြင်းမရှိပဲ ဘာသာရေးကို ခုတုံးပြု၍ သုံးစွဲခဲ့သဖြင့်၊ ကန်ထရိုက်မှ မကျေလည်၍ တိုင်ကြားသဖြင့် ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုဖြင့် အလုပ်ပြုတ်သွားသည်ကိုလည်း ဒေသခံများ သိရှိကြပါတယ်။
ထို့အတူ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာ အခြေစိုက်ကြတဲ့ INGO နှင့် UN အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း ဘင်္ဂလီဝန်ထမ်းများသာ ခန့်အပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ရှိရင်းစွဲဖြစ်ကြသည့် မြန်မာမွတ်စလင်များပင် မရသည့် အခွင့်အရေးများ ရရှိကြပါတယ်။ နေ့စဉ် ထမင်းစားချိန် တစ်နာရီ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း သောကြာနေ့တိုင်း အစ္စလာမ်ဘာသာ ထုံးစံ ၀တ်ပြုနိုင်ရန် ထမင်းစားချိန်အား နောက်ထပ်တစ်နာရီတိုး၍ စုစုပေါင်း နှစ်နာရီ နားချိန် သတ်မှတ်ပေးထားခြင်း၊ နားချိန်ပြီး၍ ဘင်္ဂလားများ နောက်ကြလာလျင် မည်သို့မျှ မဖြစ်ပဲ ဒေသခံ ရခိုင်များ နောက်ကြလာပါက ဒဏ်ငွေတပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ကြခြင်းများကြောင့် မကျေလည်ဖြစ်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားလူမျိုးအား INGO ၏ ရာထူးကြီးကြီးမားမားတွင် ထားမိသဖြင့် ဒေသခံ ရခိုင်များအပေါ် မောက်မောက်မာမာ ဆက်ဆံခြင်း၊ ဘာသာမတူသည့် အခြားဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးများအား Sexual Discrimination ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်သည်ကို အဖွဲ့အစည်းမှ အကာအကွယ် ပေးခြင်း စသည်များကြောင့် ဒေသခံများနှင့် ပြဿနာတက်ခြင်းကြောင့် ပြင်သစ် INGO ဖြစ်သော AMI သည် ဘူးသီးတောင် မြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ မိမိဒေသတွင် အလုပ်လုပ်ကြသလို အချို့တွေကတော့ ဘင်္ဂလားမှတစ်ဆင့်၊ ရန်ကုန်သို့ ရသည့်နည်းလမ်းမှတစ်ဆင့် ခိုးထွက်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ ခြေဦးဆန့်ကြပါတယ်။ အိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သည့် အိမ်သားများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်မှာ IPStar တပ်ဆင်ထားသည့် ဆိုင်အများစုသာ ၎င်းတို့အတွက် အားထားရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင် ပြောစရာရှိသည်မှာ အဆိုပါဒေသတွင် တာဝန်ကျနေထိုင်ကြသည့် INGO / UN များ၏ နိုင်ငံခြားသားထဲမှ တစ်ချို့၏ ရပ်တည် နေထိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ကပင် ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးများကို ပစ်ပယ်၍ ဘင်္ဂလီများကိုသာ ဦးစားပေးနေခြင်းကြောင့်လည်း ဒေသခံ ရခိုင်များ မကျေလည်မှုများ ဖြစ်ပွားကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံခြားသား အချို့မှာ အလုပ်ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် အချိန်ဇယားတောင်းပါက အမြဲတန်းအချိန်ပြည့်ဖြစ်နေသော်လည်း၊ နစခ နှင့် အာဏာပိုင်များမှ ဘင်္ဂလီများအား အနိုင်ကျင့်တဲ့ အကြောင်း ပြောချင်လို့ပါဆိုလျင် လုပ်လက်စ အလုပ်တောင် အချိန်ပေးပြီး ထိုင်နားထောင်တာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာပါ။ ထုံးစံအတိုင်း နည်းနည်းကို များများတိုင်ပီးကိုယ်လိုချင်တာကို တောင်းဆိုသွားကြတာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဘင်္ဂလီတွေကို အလွန်ကို အတိုင်အတောထူတဲ့ လူမျိုးများလို့ သတ်မှတ်ကြတာပါ။
ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ပါတ်သက်လို့ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် အလွန့်ကို မနာလိုစိတ် ကြီးကြပါတယ်။ တစ်ယောက် ကောင်းစားတာကို တစ်ယောက်က မနာလိုဖြစ်တာတွေ၊ လူမျိုးအခြင်းခြင်း နင်းပြီး အပေါ်စီကိုတက်တာတွေ၊ ကိုယ့်လိုဘရှိလာရင် တစ်ဘက်သားကို အလွန်အကကြွံဖားပြီး မလိုတော့လျင် အဆုံးစွန်အထိ သိက္ခာချပြစ်တာတွေ စော်ကားတာတွေဟာ အခုနောက်ဆုံးအားလုံး အသိဖြစ်တဲ့ ကိုကိုလင်းရဲ့ ဒေါ်စုကို ရေးတဲ့စာမှာ အတိုင်းသား မြင်ရပါတယ်။ စာ၏ အစမှာပင် သမရိုးကျ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လွန်ကဲစွာမြှောက်ပင့်ထားတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ အစချီထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
တစ်ချိန်တုန်းကလည်း ၎င်းတို့ဟာ ဦးတင်ဦးနဲ့ NLD ကို အလွန်ကိုမြှောက်ပင့်ခဲ့တာလည်း သမိုင်းကြောင်း တွေကို ပြန်လေ့လာကြည့်ရင် သိကြမှာပါ။ အခုလည်း ဒေါ်စုကို ခေါင်းတည်ပြီး အလွန်မြှောက်ပင့် ရေးသားနေပေမယ့် သူတို့လိုဘကို မလိုက်လျောခဲ့လျင် ယခုစာထဲတွင် ပါသည် ဦးတင်ဦးအား စွတ်စွဲသကဲ့သို့ ဒေါ်စုအား ထိုးနှက်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသည့်အနေဖြင့် ဒေါ်စုနှင့် ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးတွင် သဘောသဘာဝ မတူညီသည့် မေးခွန်းနှစ်ခု၏ အဖြေအား ဘီဘီစီမှ တမင်ရောနှော ထားပြီး အချိန်ကိုက် ထုတ်ပြန်လာတာကိုကြည့်လျင် သိနိုင်ပါတယ်။ (ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် http://www.facebook.com/note.php?note_id=260664180646877)
အချုပ်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ နေမှုထိုင်မှု ပုံစံ၊ အသားအရောင် မျက်နှာကြတို့သည် မိမိတို့တိုင်းပြည်တွင်းရှိ မည်သည့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနှင့်မျှ တူညီခြင်း အလျင်းမရှိပဲ ဘေးခြင်းကပ်လျက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လူမျိုးများနှင့်သာ ထပ်တူကြနေသည်ကို ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာဆိုသော သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ မဟုတ်ပဲ မည်သည့်နိုင်ငံမှ လာသည် ဆိုသည်ကို အတိအကျ လေ့လာသိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မိမိတို့နိုင်ငံအား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာရင်းဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံသားများပင် မရရှိသေးသည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်အား လက်နက်သဖွယ် အသုံးချလာခြင်းမှာ မိမိတို့ နိုင်ငံသားများ၏ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးအား မျက်ကွယ်ပြုရန် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူ ၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် လူထုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော ဒေါ်စုအားလည်း အသုံးချရန် အကွက်ကြကြ စီစဉ်ဖော်ထုတ်လာပြီး ၎င်းတို့လိုအင်အတိုင်းမဖြစ်ပါက ယုတ်မာစွာ ရှုတ်ချ စော်ကားမည့် ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာတို့၏ အကြံအစည်အားလည်း ယခုပင် အတိုင်းသား တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူပင် ယခုကဲ့သို့ မိမိနိုင်ငံသားများအား စနစ်တကျ အကောက်ကြံကာ အမျိုးသားရေးတိုက်ကွက် နိုင်ငံရေးတိုက်ကွက် ဖော်ဆောင်လာသည်များအား ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေကြသည့် Exile Media များ၏ အမျိုးသားရေးအပေါ် သစ္စာဖောက်သည်ကိုလည်း ပြတ်ပြတ်သားသားတွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါတော့သည်။
Written by: Jame Mmt
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 6:06 PM
ခေါ်တောဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံး ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ Go ahead.
အင် ဒီဆောင်းပါရေးတဲ့ကောင် ကဘင်္ဂလီ အ ကြောင်းတော်တော်ိပြီးစိတ်နာနေပုံထောက်ရ င်ဘင်္ဂလီ ကသူအမကိုဆော်သွားလို့နေမှာ